Gudoomiye Jawaari oo Digniin u Diray Dadka Ku Been Abuurta Barlamaanka – Radio Daljir
Gudoomiye Jawaari oo Digniin u Diray Dadka Ku Been Abuurta Barlamaanka
Agoosto 6, 2017 6:39 b 0
Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya ayaa digniin u diray dadka Masuuliyiinta ah ee dowladda ka tirsan iyo dad Shacabka ah ee Baraha bulshada ku faafiya wararka lidiga ku ah Golaha Shacabka.
Gudoomiye Jawaari aaa sheegay in aan la aqbali doonin in meel loogu dhaco sharafta Xildhibaanada Qaranka iyo Guddoonkooda Golaha Shacabka. Jawaari ayaa sheegay in ay la xisaabtamaya cid walbo oo warar been ah ka faafisa Golaha Shacabka.
Dhanka kalena gudoomiyaha ayaa sheegay in barlamaanku a gudanayaan waajibaad dastuuri ah laakiin aysan jirin Wasiir iyo Xukuumad ay duulaan ku yihiin, wuxuuna hadalkaan ka sheegay kulan barlamaanku ay kula xisaabtamayeen wasiir Xoosh Jibriil.
Maxkamadda Ciidanka XS oo Go’aan Ka Gaadhey Rafcaan Xukumanayaal Qaateen